Farmaajo OO sheegay In uu Muqdisho Ka bilaabi Doono dhaqan laga soo Tagay Waqtigii… | Xaqiiqonews
Farmaajo OO sheegay In uu Muqdisho Ka bilaabi Doono dhaqan laga soo Tagay Waqtigii…
Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha mudada afarta sano ee soo socota ay tahay in magaaladda Muqdisho ay noqoto halka ugu qurxoon.
Isagoo ka hadlayay munaasabada xuska dhalinyarada ee Muqdisho lagu qabtay, ayuu madaxweynaha DFS sheegay inuu doonayo in qof walba uu bishii huro labo saac oo uu uga qeyb qaadanayo nadaafada Muqdisho.
Waxaa uu yiri” Magaalada Bilicdeeda waxaan kusoo celineynaa inaan bilowno, dalkaaga wax uqabo, awal hore waxaa ay aheyd iskaa Wax uqabso, waxaan idinka codsanayaa qof walba oo muwaadin ah inuu labo saac bishii uu geliyo nadaafada magaaladda”
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in isaga uu bilaabayo shaqadaas ah Dalkaaga Wax uqabo, isla markaana uu ka shaqeynayo nadaafada caasimadda.
“Anagaa bilaabeyna, anigaa ugu horeeya, laba saac qof walba inuu gurigiisa ka hor qaado qashinka”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Hadalka Madaxweynaha ayaa kusoo aadaya xili sanadihii ugu dambeeyay ay soo hagaageysay bilicda magaaladda Muqdisho.